सेयर लगानीकर्तालाई गभर्नर अधिकारीको प्रश्न : एकै पटक ४ करोड ऋण लिनु भएको छ, यो कसरी भयो थोरै ? - Arthatantra.com
सेयर लगानीकर्तालाई गभर्नर अधिकारीको प्रश्न : एकै पटक ४ करोड ऋण लिनु भएको छ, यो कसरी भयो थोरै ?
काठमाडौैं । मौद्रिक नीतिले सेयर धितोकर्जाका गरेको कडाइको विषयमा सर्वत्र चर्चा सुरु भएको छ । लगानीकर्ताहरुले यस्तो कर्जाको सिमा घटाउनु पर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीलाई समेत भेटन पुगी सकेका छन् । जसले गर्दा कर्जाको सिमा घट्ला की भन्ने धेरैको चासो थियो । तर गभर्नर अधिकारीले लगानीकर्तालाई नै प्रश्न गर्नु भएको छ ।
नाफिजले आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको विषयमा आयोजना गरेको अन्तकृया कार्यक्रममा उहाँले कसैले ४ करोड ऋण लिनु भएको छ भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ । ‘तपाईहरुले नै ४ करोड ऋण लिएको छै भने यो कसरी थोरै भयो’ उहाँले भन्नुभयो ‘४ करोड भनेको सानो रकम हो ? १५ लाख ऋण लिन जानु त कति कागजात चाहिन्छ ।’
बैंकलाई मलाई २५ करोड, ५० करोड ऋण दिनु भनेर बैंकमा दबाब आउन थालेपनि कर्जाको सिमालाई कडाइ गरेको बताउनुभयो । उहाँले सेयर धितोकर्जाको विषयमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्श, सिएनआईली चुनावमा आउने भोटको लागि विरोध गरेको भएपनि त्यसको बैंकिङ क्षेत्रलाई धेरै नै सहज गराएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा उहाँले बैंकहरुको तथ्याङक हेर्दा गत साउन भन्दा अहिले राम्रो रहेको जानकारी गराउनुभयो । गभर्नर अधिकारीले कोरोनाले असर परेको क्षेत्रलाई सहज बनाउनको लागि मौद्रिक नीति ल्याएको स्मरण गराउँदै यो वर्ष धेरै समस्या परेका उद्योगलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति ल्याएको ल्याएको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले अहिलेको मौद्रिक नीतिले धेरै जिम्मेवारी बैंकलाई छोडेको जानकारी गराउनुभयो । अधिकारीका अनुसार बैंकले ग्राहकको अवस्था हेरेर निर्णय गर्न सक्ने र वास्तविकता थाहा पाउने भएको कारण बैंकलाई धेरै जिम्मेवारी दिएको बताउनुभयो । ग्राहकको मूल्याङकनको भूमिका प्रभावकारी हुने भएकोले बैंकलाई जिम्मेवारी बनाउनु आवश्यक रहेको उहाँको तर्क छ । उहाँले राष्ट्र बैंकले सिस्टममा सुधार गर्नको लागि सीसीडी रेसियो हटाएको बताउनुभयो
वि.सं.२०७८ भदौ ११ शुक्रवार १६:४७ मा प्रकाशित
अघिल्लाे आरविवि म्युचुअल फण्ड-१ नेप्सेमा सूचीकृत
पछिल्लाे चालु आवको पहिलो महिनामा साढे ५ अर्ब बढीको सुनचाँदी आयात, कुन देशबाट कति ?